Kojakoja misy ny sarin’i Papa Fransoa Nisy ireo nandany ana hetsiny nividianana azy
Hafatr’i Papa Miandry ny akony amin’ny mpitondra ny WWF
Tokony hisy akony eo anivon’ny fitondram-panjakana, hoy ny avy eo anivon’ny WWF Madagascar,
Mpino teny Soamandrakizay Maro ireo niakatra tosidra tampoka
Nahatratra 1.653 ireo olona narary teny Soamandrakizay vokatry ny vovoka sy ny hatsiaka raha araka ny tatitra ofisialy nataon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka omaly.
Fivondronamben'ny Eveka Nitondra fisaorana mitafotafo ho an`ny rehetra
“Namafy fiadanana sy fanantenana teto amintsika ny Papa Ray Masina tamin'ny alalan'ny famangiany, ny hafatra nomeny, tamin'ny Eokaristia notarihiny teo anatrehan'ny vahoaka iray tapitrisa avy amin'ny Diosezy 22 sy avy amin'ny lafivalon'ny Nosy,
Papa Fransoa Nandao an’i Madagasikara omaly
Nandao tanteraka an’i Madagasikara omaly talata 10 septambra ny Ray masina Fransoa, hitodi-doha ho any Vatikana any Rôma.
Mafonja ny hafatry ny Papa Fransoa Mihavàna, reseo ny kolikoly !
Ny sabotsy maraina teo no nihaona tamin'ireo manampahefana isan-tsokajiny, teny amin'ny lapan'Iavoloha ny Papa Fransoa. Tamin’izany no nisy lahateny ofisialy voalohany, hatramin'ny nigadonany omaly teny Ivato.
Nifandrombahan’ny mpino ireo karazana kojakoja misy ny sarin’i Papa Fransoa namidy teny Antanimena ny sabotsy teo. Raha ny resaka nifanaovana tamina mpivarotra iray dia ny elo no tena be mpividy indrindra izay miloko fotsy sy mavo noho ny vidiny mirary.
Ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana no tena nividy azy niaraka tamin’ny polo miloko fotsy sy mavo ihany koa. Nifampitadiavana ihany koa ny penina. Tao anatin’ny fotoana vitsy monja dia lany tanteraka izany ary tsy hisy indray raha tsy rahampitso talata, fotoana hivarotan’ireo mpivarotra. Ho an’ny tetsy amin’ny toeram-pivarotam-boky masindahy Paoly Analakely dia ilay boky nisy ny tantaran’ny Papa Frasoa sy nisy ilay lamesa natao teny Soamandrakizay omaly tamin’ny fiteny frantsay no tena be mpividy. Tsy naharaka indray ireo natontan’ireo tompon’andraikitra misahana izany izay nomarihin’izy ireo fa kojakoja tena ilaina tokoa, indrindra fa ho an’ireo manan-janaka mandinika te-hampita fahalalana. Tsiahivina moa fa nisy ihany koa ny saina kely misy ny sarin’i Papa, ny clé USB, ny kaskety, ny seza kely azo haforitra ….izay namidy teny rehetra teny ka nandanian’ireo mpizaika sasany vola ana hetsiny mihitsy.